मत्स्य व्यवसायीद्वारा अनुदान कटौतीप्रति ध्यानाकर्षण
भरतपुर, २० माघ ।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघको छैठौँ राष्ट्रिय परिषद बैठकले मत्स्य क्षेत्रमा विगत वर्षमा आएका अनुदान कटौतीप्रति गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ । भरतपुरमा बसेको माछापालक किसान अगुवाको बैठकले स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालयको बजेट स्थानान्तरण भएपनि अनुदानका कार्यक्रम कटौती भएकोमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने जनाएको छ ।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय महासचिव जोगेन्द्र महतोले परिषद बैठकले कृषिको बजेट कृषिमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले भारतबाट आयातित फर्मालिन मिसाइएको माछा नियन्त्रण गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघसँग समन्वय गराउने, साउनमा आएको बाढीले क्षति पुगेका माछापोखरीको राहत छिटो वितरण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ३५ जिल्लाका माछापालक किसानको सहभागिता रहेको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष अम्विकाप्रसाद अधिकारीले मत्स्य नीति नहुदा माछापालक किसान निराश बनेको बताए । उनले मत्स्य नीतिको तयार भएको मस्यौदालाई पारित गरी सोअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नेपाललाई माछामा आत्मनिर्भ् बनाउन संघले अभियान चलाउने बताए ।
११औँ जिल्लास्तरीय तेकवान्दो प्रतियोगिता सुरु
माघ १९ ।
भरतपुरको कबर्डहलमा जुनियर तर्फको ११औँ जिल्लास्तरीय तेकवान्दो प्रतियोगिता सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तेकवान्दो संघ जिल्ला शाखा चितवनले आयोजना गरेको तेकवान्दो प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवराज विष्टले गरेका हुन् । तेकवान्दोको उद्घाटन गर्दै विष्टले नेपालमा कुनै पनि खेल खेलेर नै जीवन निर्वाह गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने बताए । आफ्नै कार्यकालयमा खेलाडीलाई खेलेरै खान पुग्ने वातारण बनाउने उल्लेख गर्दै विष्टले मिहेनतका साथ खेल्नको लागि खेलाडीहरुलाई आग्रह गरे । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीहरुले आफ्नो ठाउँको नाम चिनाउने गरि राम्रोसँग खेल्नुपर्ने समेत विष्टले बताएका छन् । अहिले तेकवान्दो संघमा दुई वटा धार देखिएकोले ती दुवैलाई मिलाएर एउटै संघ बनाउन आफूले पहल सुरु गरिसकेको विष्टले बताए । एउटै विधाको खेलमा दुई वटा संघ भन्दा एउटा संघ भएमा बलियो हुने भएकोले एउटा संघ बनाएर अगाडि बढ्ने विष्टको भनाइ थियो । शुक्रबार उद्घाटन गरिएको तेकवान्दो प्रतियोगितामा चितवन तथा नवलपरासीको विभिन्न २८ वटा डोजाङबाट दुई सय ५० खेलाडीहरु सहभागी भएका छन् । तौल समूह र कातामा गरि प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तेकवान्दो संघका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले सेतो पेटी, पहेँलो पेटी र हरियो पेटीमा खेलाडीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराइने बताए । त्यस्तै, पुरुष तर्फ २० केजीदेखि ५८ केजी तौल समूहसम्म र महिला तर्फ २० केजीदेखि ५३ केजी समूहसम्म प्रतिस्पर्धा गराइदैछ । प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने डोजाङ र उत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफी प्रदान गरिनेछ भने खेलाडीहरुलाई मेडल र प्रमाणपत्र दिइने श्रेष्ठले बताए ।
सवारी चेकजाँचका लागि आवश्यक पर्ने रिफ्ल्याक्टर ज्याकेट चितवन प्रहरीलाइ
चितवनका विभिन्न दुई वटा संस्थाहरुले चितवन प्रहरीलाई रिफ्ल्याक्टर ज्याकेट प्रदान गरेका छन् । पिनाकल ट्रेडिङ कन्सर्न भरतपुर र नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघले प्रहरीको चेकजाँचका क्रममा आवश्यक पर्ने रिफ्ल्याक्टर ज्याकेट प्रदान गरेका हुन् । शुक्रबार प्रहरी कार्यालयमा कार्यक्रम गर्दै पिनाकल ट्रेडिङ कन्सर्नले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनलाई दुई सय ५० थान रिफ्ल्याक्टर ज्याकेट र नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई दुई सय थान रिफ्ल्याक्टर ज्याकेट प्रदान गरेका हुन् । ज्याकेट हस्तान्तरणको क्रममा पिनाकल ट्रेडिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक ईश्वर कुमार श्रेष्ठले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत उक्त ज्याकेट हस्तान्तरण गरिएको बताए । पछिल्लो समय चितवनमा दुर्घटना बढ्दै गएको तथा प्रहरीले सरप्राइज चेकजाँचको क्रम बढाएकोले चेकजाँचको क्रममा आवश्यक पर्ने ज्याकेट प्रदान गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रहरीले नागरिकसँग हातेमालो गर्दै विभिन्न काम अगाडि बढाएकोले प्रहरीलाई बेला बेलामा विभिन्न सहयोग प्राप्त हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापाले बताए । सहयोगमा प्राप्त भएको ज्याकेटले प्रहरीको चेकजाँचमा थप मद्दत पुग्दै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने थापाको भनाइ छ ।
प्रदेश ३ को राजधानीका लागि हटौंडाको विकल्प छैनः कमल थापा
उपप्रधान एवं उर्जामन्त्रि कमल थापाले प्रदेश नं. ३ को राजधानिका लागि हटौंडाको विकल्प नरहेको वताएका छन् । भौगोलिक स्थिति र पुर्वाधारका हिसावले हेटौडा नै प्रदेश नं. ३ को स्थायी राजधानि हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ । मिडिया नेपाल चितवनले शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्रि थापाले राजनितिक दलहरुले पनि सहज रुपमा स्विकार गर्ने वताए । प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत रहेका १३ ओटा जिल्ला मध्ये जहांबाट पनि ३ देखि ४ घण्टामै हेटौडा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । फाष्ट ट्राक, सुरुङ मार्ग र धरान चतरा सडक निर्माण भएपछि एकदमै छोटो दुरीमा प्रदेश राजधानि पुग्न सकिने उनले वताएका छन् । आवाज, कमल थापा, उपप्रधान एवं उर्जा मन्त्रि
उर्जामन्त्रि एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका कमल थापाले नेपालमा अब कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने वताएका छन् । अघिल्लो सरकारले अनियमित र अपारदर्शि ढंगबाट विदेशी कम्पनिलाइ बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भएको भन्दै उनले त्यस्तो निर्णय उल्टाइएको वताएका छन् । त्यसलाइ सच्याएर स्वेदशी कम्पनि र नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय साहसिक र ऐतिहासिक रहेको उनको भनाइ छ । भारतबाट आयात गरिंदै आएको विद्युत आयातको सम्झौता आगामी चैतमा सकिने भन्दै उनले त्यस अवधिभित्रै राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने वताए । आवाज, कमल थापा, उपप्रधान एवं उर्जा मन्त्रि
अर्काे प्रसंगमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले भारतिय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशविचका असमझदारी हटाएर सम्वन्ध सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वताए । उनले भारतिय विदशे मन्त्रीको नितान्त अनौपचारिक र राजनैतिक भ्रमण भएकाले यसलाई नकरात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने जरुरी नभएको वताए । विदेशी अतिथिहरु संग सम्मान र व्यवहार गर्दा कुटनितिक मर्यादाका विषयमा भने ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा कुुटनितिक मर्यादालाई उचित ढंगवाट पालना नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कुटनितिक मर्यादाका विषयमा सजक हुनुपर्ने थापाले वताएका छन् ।
प्रथम मेयर कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगितालाई महोत्सवको स्वरुप दिइने
चितवनको पटिहानीमा आयोजना गर्न लागिएको प्रथम मेयर कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगितालाई महोत्सवको स्वरुप दिइने भएको छ । दुई विदेशीसहित ७ टिम सहभागी हुने प्रतियोगितामा रोमाञ्चकारी महिला भलिबलसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम र खेलकुदका सामग्रीसहितको स्टलको अवलोकन पनि गर्न पाइने भएको छ । “पर्यटकीय नगरी पटिहानीलाई हामी झकिझकाउ बनाउँदैछौं”, प्रतियोगिता मूल संयोजक विष्णुराज महतोले भने, “२० स्टलसहित राखेर सानो महोत्सवकै झल्को दिदैछौं ।” त्यसका लागि तयारीको क्रम तीव्र बनाइएको उनले बताए । भारतको फ्रेन्च क्लब कोलकाता र र बंगलादेशको एउटा टिम सहभागी हुने पक्का भइसकेकोले खेल रोमाञ्चक हुने प्रचारप्रसार समिति संयोजक रामहरि सेढार्इंंको विश्वास छ । यसका साथै विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब, पश्चिमाञ्चल भलिबल संघको टिम र न्यू डायमण्ड एकेडेमी काठमाडौं सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगिता हेर्न ५०, १०० र २०० का टिकट व्यवस्था गरिदैछ । ठूला भलिबल प्रतियोगिताका लागि परिचित भरतपुर महानगरपालिकाको पटिहानीमा यो प्रतियोगिता आगामी माघ २७ गते सुरु गरिनेछ । प्रतियोगिता भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ ले आयोजना गर्न लागेको हो । प्रतियोगिता फागुन १ गतेसम्म आधारभूत विद्यालय धनौजीको खेलमैदानमा हुनेछ । प्रतियोगिता उद्घाटन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री तथा यसै क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समापन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पटिहानी आउने निधो भइसकेको वडाध्यक्षसमेत रहेका मूल संयोजक महतोले जानकारी दिए । पटिहानीमा ४ दशकदेखि निरन्तर भलिबल प्रतियोगिता गरिदै आएको छ । स्थानीय पद्मोदय युवा क्लबको आयोजनामा २०७२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण भलिबल गरिएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न १३ सदस्यीय स्टेयरिङ समिति, विभिन्न १६ उपसमिति, ५९ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएका छन् । प्रतियोगिताका विजेताले २ लाख रुपैयाँ, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र, उपविजेताले एक लाख रुपैयाँ ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र, तृतीय हुने टिमले ५० हजार रुपैयाँ ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र र सान्त्वना हुने टिमले २५ हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले नगद १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने अन्य विभिन्न चार विद्यामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीले पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता लिगकम नकआउटको आधारमा खेलाइने छ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न २७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने आयोजकले जनाएको छ । पटिहानीमा विभिन्न स्तरका पुरुष भलिबल त धेरै नै भएका छन् ।
स्थानिय तहको नितीगत ऐन बन्न नसक्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएन ः रेणु दाहाल
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले स्थानिय तहको नितीगत ऐन बन्न नसक्दा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको वताएकी छन् । केहि योजनाहरु प्रदेश सरकारको निर्णयबाट पास गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न कठिनाई भएको उनको भनाइ छ । उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको ५८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया एवं रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै मेयर दाहालले नगर बनमा रहेको जग्गामा व्यवस्थित अटोल्याण्ड निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । त्यसका लागि महानगरपालिकाले १ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको उनले वताइन् । नारायणगढ बजारका फुटपाथ व्यवसायलाइ तत्काल नहटाइने भन्दै उनले व्यवस्थापनका लागि पायक पर्ने जग्गाको खोजि गरिने जानकारी दिइन् । त्यस्तै बजार क्षेत्रमा दिर्घकालिन पार्किङ व्यवस्था गरिने वताउंदै दाहालले अहिले व्यवस्था गरिएको ठाउं तत्कालका लागि मात्रै भएको स्पष्ट पारेकी छन् । त्यस्तै मेयर दाहालले राजनितिक दलहरुको निश्क्रियताले मुख्य सडकहरुमा तिन पांग्रे सवारी नियन्त्रण गर्ने अभियान कार्यान्वयन हुन नसकेको वताएकी छन् । यस अभियानलाइ तत्कालका लागि थाति राखिएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि फेरि सरोकारवाला पक्ष संग छलफल गरिने उनले वताएकी छन् । उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले महानगरले नगर बनमा व्यवस्था गरेको अटो ल्याण्ड थोरै हुने वताएका छन् । त्यहां ४ देखि ५ विगाहा मात्रै जग्गा रहेको भन्दै उनले अटोल्याण्डका लागि करिब १५ विगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने वताए । नारायणी नदि किनारलाइ पर्यटकिय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न संघले हरेक २÷२ बर्षमा आयोजना गर्ने चितवन महोत्सवबाट भएको आम्दानिको ६० प्रतिशत रकम छुट्याइएको उनको भनाइ छ । भरतपुर महानगरपालिका संग स्पष्ट खाका नहुंदा उद्यँेग बाणिज्य संघले नारायणी नदि किनारमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । यसैविच संघले आफ्नो ५८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ४३ जनाले रक्तदान गरेका छन् । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं प्रदेश नं. ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतम, उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कल्याण जोशि, डा तिलचन्द्र भट्टराई, पुष्पाञ्जलि अस्पतालका फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
आर्मीलाई हराउँदै गैंडाकोट क्वाटरफाइनलमा
चितवन । माघ १९ ।
प्यासिफिक कलेज चौथो चितवन च्याम्पियनसिप कप फुटवल प्रतियोगिताको शुक्रबारको खेलमा गैडाकोट फुटबल क्लवले २–१ को गोल अन्तरले अघिल्लो प्रतियोगिताकोे विजेता नेपाली सेनाको द फेमस (महेन्द्र दल) गण भरतपुरलाई पराजित गरेको छ ।
विजयी भएसँगै गैंडाकोट क्वार्टर फाईनल प्रवेश गरेको छ । दोस्रो हाफको ४९औं मिनेटमा गैडाकोटका कान्छा गुरुगंले पहिलो गोल गरेका थिए । खेलको अतिरिक्त समयमा गैडाकोटको तर्फबाट दिपेश मगरले गोल थप गरी जित निश्चित गरेका थिए । लगत्तै अन्तिम १ मिनेट बाँकी रहँदा नेपाली सेनाको द फेमस (महेन्द्र दल) गणका सुदिपराज श्रेष्ठले गोल गरेका थिए ।
खेलको म्यानअफ दि म्याच गैडाकोटका गोलरक्षक आकास रानाभाट भए । उनलाई नेपाली सेनाका सहायक रथि रामनाथ ढुगांना र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमानसिहं भण्डारीले ट्रफि प्रदान गरेका थिए । फाल्गुन २ गते सम्म चल्ने खेलको बिजेताले नगद २ लाख २२ हजार र उप बिजेताले १ लाख ११ हजार प्राप्त गर्ने छन् । प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको छ । शनिबारको खेल जु जुगेडी क्लब र अभिषेक चर्च रजहरका बीचमा हुने आयोजक क्लव एभरेष्ट क्लवका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले जानकारी दिए ।
चितवनमा नक्कली नोट भेटिदै
हिन्दु जागरण अभियान नेपाल चितवनको अध्यक्षमा निरज शर्मा काफ्ले चयन÷गलत नियतले धर्मपरिवर्तन गराउने प्रवृत्ति बढेकोमा अभियानको आपत्ति
चितवन च्याम्पियनसिप कप फुटवल प्रतियोगिताको विहीबारको खेलमा रामपुर विजयी